Madaxweynaha Mareykanka oo markale Pyongyang ugu hanjabay Guluf Militari | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Mareykanka oo markale Pyongyang ugu hanjabay Guluf Militari
Madaxweynaha Mareykanka oo markale Pyongyang ugu hanjabay Guluf Militari
Mareykanka(SONNA) Waxaa sii kordhaya khilaafaadka dhinaca diblomaasiyadda ee u dhaxeeya wadamada Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi,taasi oo salka ku haysa barnaamijka Nuclearka Waqooyiga Kuuriya.
Donald Jey Trump Madaxweynaha Wadanka Mareykanka ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay in uu qaado tallaabo milatari oo uu ku tilmaamay in ay xal u tahay xasaradda Kuuriyada Waqooyi, isagoo uga digay Xukuumada Pyongyang in arrintaasi ay ku noqon doonto awaaqib xumo.
Kadib shir jaraa’id uu ku qabtay Aqalka Cad ee looga arrimiyo Mareykana isagoo barbar taagnaa Ra’iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayuu hadalkan jeediyay madaxweyne Trump oo u muuqda qof aad uga careysan talaabada dhanka Nuclearka ah oo ay qaadayso Waqooyiga Kuuriya.
Wuxuu sidoo kale Donalda Trump weerar dhanka afka ah ku qaaday hoggaamiyaha Kuuriyada Woqooyi, Kim Jong-un, oo uu ku eedeeyay in uu u dhaqmayo si xun isla markaana uu ku socdo waddo qaldan.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa isagoo ka hadlayay mowqifka Mareykanka uu ka taagan yahay arrinta Kuuriyada Waqooyi ayuu ku sheegay in mareykanka uusan rabin dagaal balse talaabadaasi ay imaan karto hadii loo arko in Pyongyong ay keento khataro.
Previous articleRa’iisul Wasaare Khayre oo la kulmay Senatorka laga soo doorto Minnesota
Next articleRa’iisul Wasaaraha Xukumadda Soomaaliya oo sheegay in Dowladda Federaalka ah ka Go’an tahay Xasilinta Dalka